कोभिड खोपले शरीरमा चुम्बकीय शक्ति दिने गलत दाबी :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोभिड खोपले शरीरमा चुम्बकीय शक्ति दिने गलत दाबी धातु शरीरमा किन टाँसिन्छ?
इन्जिना पन्थी/साउथ एसिया चेक मंगलबार, असार १, २०७८, १८:४३:५०
फेसबुक प्रयोगकर्ता राहुल बस्नेतले पोष्ट गरेको भिडियोमा काठमाडौंमा बस्ने संगीता तिमिला नाम गरेकी महिलाले कोभिडको खोप लगाएपछि उनको शरीरमा ‘चम्चा थाल टाँसिन थालेको र शरीर नै चुम्बकजस्तो भएको’ दाबी छ। त्यस्तो देखेर डाक्टर नै चकित परेको दाबी भिडियोमा गरिएको छ। सो पोष्टलाई पाँचपटक शेयर गरिएको छ भने त्यसमा ३५ वटा प्रतिक्रिया छन्। तिमिलाले कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि शरीरमा चुम्बकीय शक्ति आएको दाबी सम्बन्धी समाचार ‌ओएस नेपाल र केटिएम नामक अनलाइनले प्रकाशित गरेका छन्। करीब ९० हजार बढीले लाइक गरेको लभ नेपाल नामक फेसबुक पेजमा पनि उक्त भिडियो शेयर गरिएको छ। तिमिलाको उक्त भिडियो युट्युबमा पनि पोष्ट गरिएको छ। त्यस भिडियोलाई करिब ५ हजार पटक हेरिएको छ।
धातु शरीरमा किन टाँसिन्छ?
भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ५० वर्षमाथिकालाई भेरोसेल खाेप लगाइने २३ मिनेट पहिले